U-Elgar noBavuma bangokaputeni abasha bamaProteas | Scrolla Izindaba
U-Elgar noBavuma bangokaputeni abasha bamaProteas
Ngemuva kohambo olubi lwamaProteas lokuya e-Pakistan, i-Cricket South Africa (CSA) National Panel of Selectors (NPS) iqoke uDean Elgar kanye noTemba Bavuma njengokaputeni bamaProteas.
U-Elgar uzohola amaProteas ochungechungeni lokuhlolwa kanti uBavuma yena uzobe ematasa ehola isikwati kumdlalo we-One Day Internationals nowe-Twenty20 (T20).
UBavuma, osemele amaProteas amahlandla angama-42 kukhilikithi yokuhlolwa futhi waba ngumuntu wokuqala omnyama waseNingizimu Afrika ukushaya amagoli ayikhulu kuma-run, uzohola amaProteas eNdebeni yoMhlaba ngowe-2021 nangowe-2022 ye-ICC Men’s T20 World Cup kanye ne-ICC Men’s World Cup ngo-2023.
UBavuma uthe, uzizwa ehloniphekile futhi kuyamjabulisa ukuhola amaProteas okokuqala ngqa futhi wafunga ukuthi uzolibamba ngezandla zombili leli thuba.
“Ukuba ngukaputeni wamaProteas bekuyiphupho lami iminyaka eminingi njengoba labo engisondelene nabo bazi. Kuyinto enhle kakhulu empilweni yami njengamanje futhi ngilangazelela ukuqhubeka lapho ekugcine khona uQuinny (de Kock),” kusho uBavuma.
U-Elgar uthe, yena noBavuma bazi ngaphezu kwezinselelo eziningi ebeziphambi kwabo zokubuyisa iqembu lekhilikithi laseNingizimu Afrika ezinsukwini zalo zodumo.